Ifulethi elithandekayo esikhungweni sezomlando, indawo enhle yokubuka+indawo yokubhukuda - I-Airbnb
Ifulethi elithandekayo esikhungweni sezomlando, indawo enhle yokubuka+indawo yokubhukuda
Santa Marta, Magdalena, i-Colombia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Alberto
U-Alberto Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elithokomele neligqamile elitholakala esakhiweni sokuhlala esidala enkabeni engokomlando ye-Santa Marta. Inekhishi elinakho konke, i-air conditioning, indlu yokugezela yangasese, i-TV, I-NETFLIX, i-Amazon Prime NE-WIFI
Ngokuhlobisa kwesimanjemanje, nokufinyelela endaweni yokubhukuda eqhele ngemizuzu engu-3. Ngaphezu kwalokho, ukuhambahamba imizuzu engu-3 usuka esitolo esikhulu Sempumelelo nemizuzu engu-5 usuka e-Parque de los Novios, futhi eduze nemigwaqo emikhulu.
Indawo ekahle kakhulu yokuphumula nokwazi isikhungo esiyingqophamlando se-Santa Marta.
Ifulethi linekamelo elinombhede olala abantu ababili, i-air conditioning, ifeni kasilingi, i-closet negumbi lokugezela langasese elineshawa, kanye nelinye ikamelo elinombhede olala umuntu oyedwa (imibhede emibili elala umuntu oyedwa), umbhede wosofa, i-air conditioning, i-closet kanye ne-fan emile. Omabili amagumbi anombono omuhle wezintaba zase-Sierra Nevada de Santa Marta
Igumbi lokuphumula elincane nelinethezekile elibheke enkabeni yedolobha, ikhishi elinakho konke, indawo yokuwasha izingubo, igumbi lokugezela elisizayo elineshawa nokukhanya okuhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inesevisi ye-intanethi ye- optic enhle kakhulu, I-WIFI, i-cable TV, I-NETFLIX ne-Amazon prime.
Indawo ayinakudlulwa, ukuhamba imizuzu engu-3 usuka esitolo esikhulu Sempumelelo nemizuzu engu-5 ukusuka epaki lomyeni nomkhwenyana kanye nendawo yeposi (indawo yezindawo zokudlela, ama-bar nama-club), futhi eduze nemigwaqo emikhulu.
Ifulethi linikeza ithuba lokufinyelela ithala elinendawo yokubhukuda kanye nokubukeka kwendawo yonke yedolobha, ukuhambahamba nje imizuzu engu-2
4.67 · 21 okushiwo abanye
Indawo enhle, ukuhamba imizuzu engu-3 ukuya esitolo esidayisa impumelelo nemizuzu engu-5 ukuya e-Parque de los Novios ne-Callejón del Corre (indawo yokudlela, i-bar nezokuzijabulisa kwasebusuku), i-Bahía de Santa Marta ne-Marina Internacional. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo sitholakala emgwaqweni ongadlula futhi ophephile.
Soy una Persona Descomplicada pero organizada , me gusta sentirme bien y que quienes esten a mi alrededor tambien lo esten , comodidad , tranquilidad y Economía son mis palabras Favoritas.
Siyatholakala nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezingaba naso, senza konke okusemandleni ukuze sikwenze kube ukuhlala okukhumbulekayo eSanta Marta yomlando. Ngaphezu kwalokho, sinolwazi olujulile lwedolobha, esizimisele ukwabelana ngalo ngentokozo enkulu.
Siyatholakala nganoma yisiphi isidingo izivakashi zethu ezingaba naso, senza konke okusemandleni ukuze sikwenze kube ukuhlala okukhumbulekayo eSanta Marta yomlando. Ngaphezu kwalok…
UAlberto Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 88584
Hlola ezinye izinketho ezise- Santa Marta namaphethelo